-सुदर्शन सापकोटा, दिनेश खड्का/बिजमाण्डू
प्रकाशित मिति: Jul 18, 2019 11:55 AM | २ साउन २०७६
विभागले सहकारीमा रहेको बस्नेतको पैसा 'फ्रिज' गरेर अनुसन्धान थालिसकेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थापछि सहकारीमा समेत सम्पत्ति शुद्धिकरण कार्यान्वयनमा ल्याएपछि उनले निक्षेप राख्नेवित्तिकै त्यसको जानकारी वित्तीय जानकारी ईकाइ र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा पुगेको थियो।
'प्रारम्भिक अनुसन्धानमा बस्नेतको कर छली गरेको भेटिएको छ। उहाँको 'ब्याकग्राउन्ड' सँग यति ठूलो पैसाको मेल खाने देखिएन। त्यही भएर सहकारी विभागमार्फत पैसा रोक्का गरिदिएका छौं' शुद्धिकरण विभागका एक अनुसन्धान अधिकृतले बिजमाण्डूसँग भने, 'अरु स्रोतहरु पनि खोजिरहेका छौं। अहिले सहकारीमा स्रोत नपुग्ने पैसा भेटिएको छ।'
विभागले अहिले पोलिटिकल्ली एक्सपोज पर्सन (राजनीतिक रुपमा चिनिएका) हरुको अनुसन्धान तीब्र बनाएको छ। विभागले केही समयमै नेपाली कांग्रेसका सांसद सूर्यबहादुर केसी विरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, शेयर, सुन बजारका साथै पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा पनि शुद्धिकरणको नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न थालिएको छ। यसैक्रममा अनुसन्धान गर्दा बस्नेतको 'कालोधन' फेला परेको विभाग स्रोतले जानकारी दियो।
बस्नेतको कालोधका बारेमा शुद्धिकरण विभागका साथै सहकारी विभाग र राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय जानकारी इकाइले पनि काम गरिरहेको छ। इकाइले उनको वित्तीय कारोबारको 'ट्रयाक' गर्न थालेको छ भने शुद्धिकरण विभागले अन्य निकायसँग समन्वय गरेर अनुसन्धान तीब्र बनाएको छ।
'अब हामी बस्नेतजीलाई बयानका लागि बोलाउने तयारीमा छौं। अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा गैरकानुनी रुपमा नै धन आर्जन गरेको देखिन्छ' ती अनुसन्धान अधिकृतले भने, 'बयानपछि हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णयमा पुग्छौं।'
शुद्धिकरण विभाग केपी ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा ल्याइएको निकाय हो। विभागले कसलाई कारवाही अगाडि बढाउने भनेर सोझै प्रधानमन्त्रीको राय लिन्छ। 'राजनीतिक रुपमा लागेका ब्यक्तिहरुको अनुसन्धान त्यति सजिलो छैन' ती अनुसन्धान अधिकृतले भने, 'प्रधानमन्त्रीबाट 'गो अहेड' भन्ने निर्देशन आएमा मुद्दा हाल्ने छौं।'
बस्नेतको ६१ करोडको स्रोत नखुलेको पैसाका बारेमा उनका परिवार र नातेदारमा पनि अनुसन्धान तीब्र पारिएको छ। 'वित्तीय जानकारी इकाइबाट हामीले परिवार र नातेदार सबैको बैंकिङ 'हिस्ट्री' मागेका छौं' विभाग स्रोतले भन्यो, 'इकाइले सहयोग गर्यो भने अझै गहिरोमा पुगेर अनुसन्धान गर्न सकिन्छ।'
पूर्व मन्त्री मोहन बस्नेतको ६१ करोड 'कालोधन' शुद्धिकरण विभागले भेट्यो को लागी १ प्रतिक्रिया(हरु)
Chandra Prasad Neupane[ 2019-07-18 08:34:10 ]
माेहनदाइकाे अाम्दानी गजब । व्यापारबाट जम्मा भएकाे पैसा अझै कति हाेलान् । जावाे ६१ कराेड के हाे र ? तिबेतनसँग पनि सम्बन्ध हुनसक्छ । उताबाट सुन अाउँछ रे !
हालसम्म २६२ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।